Ungalitshintsha njani ilizwe elinomxholo kwiYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungalitshintsha njani ilizwe elinomxholo kwiYouTube?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 306
Iqonga leYouTube livumela ukhetho lokumisela iakhawunti yethu ukuze isicelo sisibonise ngokubanzi kunye neziphumo zophando zehlabathi. Abasebenzisi ngoku banokutshintsha ilizwe elinomxholo kwaye bafumane ukuba zeziphi iividiyo ezidumileyo kwezo ntlanga.
Ngalo lonke ixesha ungena kwiqonga levidiyo elidumileyo, iYouTube iyakubonisa ezona vidiyo zidumileyo kwilizwe lakho. Ukuba ufuna iphepha liqale ukukubonisa umxholo owenziwe kwezinye iindawo, nakwezinye iilwimi, ungakwenza oko ngokutshintsha iisetingi zeakhawunti yakho.
Mhlawumbi ubungazi kodwa iqonga le-YouTube libandakanya ukhetho apho Abasebenzisi bakho banokukhetha ilizwe abafuna ukufumana uninzi lomxholo kulo.
Eli phepha lichaza olu khetho njenge “indawo yomxholo”Kwaye kuyo kufuneka sibonise ilizwe esifuna ukuba iqonga lisibonise kulo xa sifikelela kuYouTube.
I-YouTube ngokungagqibekanga iya kusibonisa iividiyo ezithandwayo zelizwe lethu kunye nolwimiNangona kunjalo, iindaba ezimnandi zezokuba sinokuluguqula olu seto kwaye sisete ilizwe esilifunayo. Ukwenza kulula kakhulu, ke hlala nathi ukuze ufunde amanyathelo oza kuwalandela.
Amanyathelo okutshintsha indawo yomxholo kuYouTube
Ngaba ufuna iYouTube ikubonise iividiyo ezidumileyo kwamanye amazwe? Emva koko kuya kufuneka utshintshe indawo ekuyo umxholo, emiselweyo ngokusisigxina kwilizwe apho wavula khona iakhawunti yakho.
Ukuba ngexesha lokudala iakhawunti yakho uthe uhlala eVenezuela, isicelo sizakubonisa iividiyo ezithandwayo zelo lizwe ngalo lonke ixesha ungena kwiYouTube. Kodwa ungalutshintsha oluqwalaselo kumanyathelo ambalwa:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ngena eqongeni I-Youtube evela kwisicelo efakwe kwiselfowuni
Ngoku kufuneka uyenze Cofa kumfanekiso weprofayile (kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini)
Cofa kwindawo okhetha kuyo "ukuseta”Ukufikelela kwezinye iindlela.
Cofa ku "ngokubanzi"
Yiya kukhetho "indawo"
Khetha ilizwe lokhetho lwakho kwaye kunjalo
Ngoku Ngalo lonke ixesha ungena kwiqonga leYouTube, iividiyo ezithandwayo zelizwe olikhethileyo ziya kuvela.. Unokukhetha ilizwe olifunayo, kodwa linye kuphela ngexesha. Ngale ndlela unokubukela iividiyo ezidumileyo ezivela kwezinye iingingqi.
Guqula indawo kwiPC
Ungayitshintsha indawo ekuyo iakhawunti yakho ukusuka kwinguqulelo yedesktop yeYouTube. Ukwenza njalo kufuneka ungene Www.youtube.com kwaye uvule iakhawunti yakho hayi igama kunye negama lomsebenzisi.
Emva kokuba kwiakhawunti yakho kuya kufuneka Cofa kumfanekiso weprofayile okanye i-avatar ebonakala kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini. Nje ukuba ucofe apho, uya kufumana iindlela ezininzi.
Kule meko kufuneka ukhethe ukhetho oluthi "indawo”. Uluhlu olunawo onke amazwe ehlabathini luya kuvela. Khetha enye yokhetho lwakho kwaye yiyo loo nto. Ukusukela ngoku eqongeni kuyakuvumela ukuba ubukele iividiyo ezithandwayo ezivela kwezinye iingingqi.
1 Umxholo wendawo
2 Amanyathelo okutshintsha indawo yomxholo kuYouTube
3 Guqula indawo kwiPC
Wazi njani ukuba ngawaphi amaqela enifana ngawo kwiTelegram